ESI EWEPU NJIKỌ VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Esi ewepu njikọ VKontakte
CBR (Achịkọ Akụrụngwa) bụ ebe nchekwa RAR nke nwere faịlụ oyiyi ka a na-edegharị ndọtị ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eji usoro nhazi a iji chekwaa ndị na-eme egwuregwu. Ka anyị hụ ihe ngwanrọ ọ ga-emeghe.
Software CBR Viewer
CBR nwere ike ịmalite iji ngwa ndị ọkachamara maka ịlele igwe egwu. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ngwa ngwa maka ịlele akwụkwọ na-akwado ya. Ọzọkwa, nyere CBR na, n'ezie, RAR archive, ọ nwere ike meghee site na Archiver mmemme na-akwado ọrụ na usoro a.
Usoro 1: ComicRack
Otu n'ime ngwa egwu egwu egwu kachasị ewu ewu na-arụ ọrụ na CBR bụ ComicRack.
Mwepụta ComicRack. Pịa ihe "Njikwa" na menu. Ọzọ na ndepụta, gaa "Meghee ...". Ma ọ bụ na ị nwere ike iji akara bọtịnụ. Ctrl + O.
Na windo mbido nke faịlụ ahụ, nke a ga-egosipụta mgbe nke a gasị, kwaga na mpaghara nke diski ike ahụ ebe echekwara kọntaktị kọmputa CBR na echekwara. Iji gosipụta ihe achọrọ na windo ahụ, megharịa bọtịnụ ntinye faịlụ gaa n'aka nri nke mpaghara ahụ "Filename" na ọnọdụ "eComic (RAR) (* .cbr)", "Faịlụ niile akwadoro" ma ọ bụ "Faịlụ niile". Mgbe igosiri na mpio, kaa aha ya ma pịa "Meghee".
A ga-emeghe comicsRack na kọmputa.
A pụkwara ile CBR anya site n'ịdọkpụ ya Windows Explorer na ComicRack. N'oge usoro nke ịdọrọ na òké ahụ, a ga-agbanye bọtịnụ aka ekpe.
Usoro 2: Egwú egwu
Ngwá ọrụ mbụ nke egwuregwu ndị na-egwu egwu na-akwado CBR bụ ngwa CDisplay. Ka anyị hụ otú usoro maka ịmepe faịlụ ndị a na-ewere ọnọdụ n'ime ya.
Mgbe ịmalite igodo CD, ihuenyo ahụ na-acha ọcha, ọ nweghịkwa njikwa na ya. Atụla egwu. Iji kpọọ menu, pịa bọtịnụ ọ bụla na ihuenyo ahụ na bọtịnụ aka nri. N'ime ndepụta nke omume, akara "Ejiri faịlụ" ("Bulite faịlụ"). Omume a bụ replaceable site na ịpị igodo. "L".
Ngwa mmalite ahụ na-amalite. Gaa na ya na nchekwa ebe ọnye CBR dị na ya, jiri ya ma pịa "Meghee".
A ga-ebugharị ihe ahụ site na ntụgharị CDis maka obosara nke nyocha ihuenyo.
Usoro nke 3: Onye na-ahụ ọchị
Onye ọzọ na-ekiri egwu nke nwere ike ịrụ ọrụ na CBR bụ onye na-ahụ ọchị. N'eziokwu, ngwa a abụghị onye Russia.
Download Aghọ Aghụghọ Ule
Mwepụta ihe nkiri ọchị. Pịa na akara ngosi ahụ "Meghee" ma ọ bụ tinye bọtịnụ Ctrl + O.
Mgbe ịmalitere ngwá ọrụ ịhọrọ ihe, gaa na ndekọ ebe ebe ọbụbụ kọmputa dị na-amasị gị dị. Dee ya ma pịa "Meghee".
Ihe a ga-ebido site na njikwa ihe nkiri Comic Seer.
O di nwute, enweghi ihe ndi ozo iji lelee ndi ozo di na Comic Seer.
Nzọụkwụ 4: STDU Viewer
Ihe maka ịlele akwụkwọ STDU Viewer, nke nwekwara ike ịsị dịka "ndị na-agụ", nwekwara ike mepee ihe CBR.
Download STDU Viewer n'efu
Bido Onye na-ekiri STDU. Iji malite window windo mmeghe, ọ ga-ezuru aka-ekpe n'etiti etiti ihe omume ahụ, ebe edere ya: "Iji mepee akwụkwọ dị ugbu a, pịa okpukpu abụọ ebe a ...".
Enwere ike ị nweta otu ihe ahụ site na ụzọ ọzọ: pịa "Njikwa" na menu wee gaa "Meghee ...".
Ma ọ bụ site na ịpị akara ngosi ahụ "Meghee"nke nwere ọdịdị nke nchekwa.
N'ikpeazụ, enwere ike iji nchikota mkpọchi zuru ụwa ọnụ. Ctrl + Onke a na-eji emeghe faịlụ mmeghe faịlụ na ọtụtụ ngwa na Windows.
Mgbe ịmalite ngwá ọrụ ahụ "Meghee" Gbanwee na ndekọ diski ike ebe ebe CBR dị. Mgbe enyochachara ya, pịa "Meghee".
A ga-enwe ihe nkiri maka ikiri site na interface STDU Viewer.
E nwekwara nhọrọ ịlele comic kọmputa na STDU Viewer site na ịdọrọ ya na Onye nduzi na windo ngwa ahụ n'otu ụzọ ahụ e mere mgbe ịkọwa usoro ahụ site na iji usoro ComicRack.
N'ozuzu, ọ dị mkpa ikwupụta na, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ngwa ngwa nke STDU na-arụ ọrụ nke ọma na usoro CBR, ọ ka bụ ihe na-erughị adaba maka ikiri ndị na-egwu kọmputa karịa ihe atọ gara aga.
Usoro 5: Sumatra PDF
Onye ọzọ na-ekiri ihe ederede nke nwere ike ịrụ ọrụ na usoro a na-amụ bụ Sumatra PDF.
Download Sumatra PDF maka n'efu
Mgbe ịmalite Sumatra PDF, na mmalite window nke usoro ihe omume ahụ, pịa "Mepee akwukwọ".
Ọ bụrụ na ịnọghị na mmalite nke usoro ihe omume ahụ, gaa na ihe menu "Njikwa"wee họrọ "Meghee ...".
Ma ọ bụ i nwere ike iji akara ngosi ahụ "Meghee" n'ụdị nchekwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji hotkeys, enwere ike iji ya Ctrl + O.
Window oghere ga-emeghe. Gaa na ya na nchekwa ebe ihe achọrọ dị. Họrọ ya, pịa "Meghee".
Egwuregwu ndị a na Sumatra PDF.
E nwekwara ohere nke imeghe ya site n'ịdọkpụpụta Onye nduzi n'ime ngwa ngwa ọrụ.
Sumatra PDF abụghịkwa usoro pụrụ iche maka ikiri ihe eji egwu egwu ma ọ bụ enweghị ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ na ha. Ma, ka o sina dị, usoro CBR gosipụtara.
Usoro 6: Onye nyochaa ihe niile
Ụfọdụ ndị na-ekiri ụwa niile na-emeghe ọ bụghị naanị akwụkwọ, kamakwa vidiyo, yana ọdịnaya site na mpaghara ndị ọzọ, nwekwara ike ịrụ ọrụ na usoro CBR. Otu n'ime mmemme a bụ Universal Viewer.
Download Universal Viewer maka n'efu
Na nyocha Universal Viewer, pịa akara ngosi ahụ. "Meghee"nke na-ewe ụdị folda.
A ga-eji dochie anya mpempe akwụkwọ a site na ịpị akara "Njikwa" na nchịkọta nhọrọ na ntụgharị oge na aha "Meghee ..." na ndepụta ndị e depụtara.
Nhọrọ ọzọ na-agụnye iji ngwakọta nke Ctrl + O.
Ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a n'elu ga-eme ka windo ahụ rụọ ọrụ. "Meghee". Iji ngwá ọrụ a, ịnyagharịa na ndekọ ebe a na-etinye egwu ahụ. Kwuo ya wee pịa "Meghee".
A ga-egosi ihe nkiri site na interface Universal Viewer.
E nwekwara nhọrọ nke ịdọrọ ihe site na Windows Explorer na windo ngwa. Mgbe nke ahụ gasịrị ị ga-enwe mmasị na-ekiri ihe egwuregwu ahụ.
Usoro 7: Archiver + Image Viewer
Dịka e kwuru n'elu, usoro CBR bụ, n'eziokwu, RAR Archive, bụ ebe ihe oyiyi oyiyi dị. Ya mere, ị nwere ike ịlele ọdịnaya ya site na iji nchekwa ihe na-akwado RAR na onye nlele eserese dị na kọmputa gị. Ka anyị hụ otú e nwere ike isi mejuputa nke a site na iji ngwa WinRAR dị ka ihe atụ.
Mee WinRAR rụọ ọrụ. Pịa aha "Njikwa". Tinye akà na ndepụta "Mepee Archive". I nwekwara ike iji nchikota Ctrl + O.
Mmiri amalite Search Archive. Achọrọ na ụdị usoro ụdị, họrọ "Faịlụ niile"ma ọ bụghị, faịlụ CBR ga-apụta na windo. Mgbe ị gara ebe ihe achọrọ, họrọ ya ma pịa "Meghee".
Ndepụta nke ihe oyiyi dị na Archive ga-emeghe na windo WinRAR. Degharịa aha ha site na ịpị aha aha kọlụm ahụ "Aha", ma pịa bọtịnụ aka òké aka abụọ na mbụ n'ime ndepụta ahụ.
A ga-emeghe onyinyo ahụ na onye na-ekiri ihe oyiyi, nke arụnyere na kọmputa a site na ndabara (n'ọnọdụ anyị, nke a bụ Faststone Image Viewer).
N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịlele ihe oyiyi ndị ọzọ (akwụkwọ akwụkwọ egwu) nke dị na archives CBR.
N'ezie, maka ikiri ihe eji egwu egwu usoro a site na iji nchekwa ihe bụ ihe kachasị adaba n'ime nhọrọ niile edepụtara. Ma n'otu oge ahụ, site n'enyemaka ya, ị nwere ike ọ bụghị naanị na-ele ọdịnaya nke CBR, ma dezie ya: gbakwunye faịlụ mbiet (peeji nke) na ihe eji egwu ma ọ bụ hichapụ ndị dị. WinRAR na-arụ ọrụ ndị a site na iji otu algọridim dị ka ụlọ ọrụ RAR.
Ihe omumu: Otu esi eji WinRAR
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ ọgụgụ nke mmemme na-arụ ọrụ na usoro CBR, mana n'etiti ha, ọ dịkwa nnọọ mfe ịchọta nke ga-egbo mkpa onye ọrụ ruo n'ogo. Nke kachasị mma, maka nlele ihe, n'eziokwu, jiri ngwanrọ pụrụ iche maka ịlele comics (ComicRack, CDisplay, Comic Seer).
Ọ bụrụ na ịnweghị ịwụnye mgbakwunye ngwa iji rụọ ọrụ a, ị nwere ike iji ụfọdụ ndị na-ekiri ihe ederede (STDU Viewer, Sumatra PDF) ma ọ bụ ndị na-ekiri ihe niile (dịka ọmụmaatụ, Universal Viewer). Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka idezi CBR Archive (tinye ihe oyiyi ma ọ bụ hichapụ ha n'ebe ahụ), mgbe ahụ, enwere ike iji nchekwa na-akwado ọrụ RAR (WinRAR).